Pinterest भिडियो डाउनलोडर - Pinterest भिडियोहरू, छविहरू र Gif अनलाइन डाउनलोड गर्नुहोस्
Pinterest छवि डाउनलोडर
Pinterest भिडियो, छवि र Gif अनलाइन डाउनलोड गर्नुहोस्
Pinterest डाउनलोडर कसरी प्रयोग गर्ने?
#1. भिडियो URL प्रतिलिपि गर्नुहोस्
तपाईंले बचत गर्न चाहनुभएको Pinterest भिडियो URL प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
#2. लिङ्कहरू टाँस्नुहोस्
तपाईंले डाउनलोड गर्न प्रतिलिपि गर्नुभएको Pinterest भिडियोको URL टाँस्नुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
#3. भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
अब केवल डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाइँको डाउनलोड सुरु हुनेछ।
Pinterest डाउनलोडर एक नि: शुल्क Pinterest भिडियो डाउनलोडर अनलाइन उपकरण हो। तपाईंले Pinterest डाउनलोडर प्रयोग गरेर आफ्नो कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा मोबाइलमा सिधै Pinterest छविहरू र Gif डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले Pinterest भिडियोहरूलाई हाई डेफिनिशन MP4 ढाँचामा बचत गर्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र PinterestDownloader.com मार्फत HD JPG ढाँचामा Pinterest छविहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले किन Pinterest डाउनलोडर विकास गर्यौं? किनभने हामीले देख्यौं कि Pinterest ले भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदैन। जसका कारण मानिसहरूले Pinterest भिडियोहरू डाउनलोड गर्न धेरै समस्याको सामना गरिरहेका थिए। Pinterest डाउनलोडर नि: शुल्क र सजिलो तरीकाको लागि Pinterest भिडियोहरू डाउनलोड गर्न चाहनेहरूको लागि एक समाधान हो।
Pinterest भिडियोहरू, छविहरू वा Gif कसरी डाउनलोड गर्ने
Pinterest डाउनलोडर तपाईको लागि प्रयोग गर्न सजिलो छ। तपाईं सजिलैसँग Pinterest बाट कुनै पनि सीमा बिना भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईंलाई कुनै पनि दर्ता वा डाउनलोडको लागि शुल्क तिर्न आवश्यक पर्दैन। यो उपकरण पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। Pinterest भिडियोहरू अनलाइन डाउनलोड गर्न तलका सरल चरणहरू पालना गर्नुहोस्।
Pinterest एप खोल्नुहोस् र तपाईंले डाउनलोड गर्न चाहनुभएको भिडियो वा छवि वा gif चयन गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ Pinterest एपको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने Pinterest एपको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको ••• आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् त्यसपछि एपको तल दायाँ कुनामा रहेको ••• आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। ••• आइकन ट्याप गरेपछि प्रतिलिपि लिङ्कमा ट्याप गर्नुहोस्।
डाउनलोड इनपुट बक्समा भिडियो Url टाँस्नुहोस्, र डाउनलोड बटनमा ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईंले आफ्नो डाउनलोड फाइलको पूर्वावलोकन हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ यसको तलको डाउनलोड बटन।
डाउनलोड गर्न डाउनलोड बटनमा ट्याप गर्नुहोस्। Pinterest भिडियो वा छवि वा gif तपाईंको उपकरणमा डाउनलोड हुनेछ।
के मैले भिडियोहरू डाउनलोड गर्न खाता दर्ता गर्न आवश्यक छ?
होइन, भिडियो वा छविहरू वा Gif डाउनलोड गर्नको लागि तपाईंलाई खाताको आवश्यकता पर्दैन।
के PinterestDownloader मेरो यन्त्रको लागि सुरक्षित छ?
हो, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो प्रयोगकर्ताको सुरक्षा हो। PinterestDownloader डाउनलोड गर्न पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। कुनै भाइरस छैन, कुनै मालवेयर छैन
डाउनलोड पछि भिडियो कहाँ सुरक्षित छ?
जब तपाइँ भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तिनीहरू सामान्यतया तपाइँको ब्राउजर द्वारा चयन गरिएको फोल्डरमा पूर्वनिर्धारित रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। यदि तपाइँ डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू फेला पार्न सक्नुहुन्न भने तल दिइएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ विन्डोज प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, डाउनलोड इतिहास हेर्न किबोर्डमा Ctrl + J थिच्नुहोस्।
यदि तपाइँ म्याक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, डाउनलोड इतिहास हेर्न किबोर्डमा Cmd + Shift + J थिच्नुहोस्।
यदि तपाइँ स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको ब्राउजरको पूर्वनिर्धारित डाउनलोड मार्ग जाँच गर्नुहोस्।
के PinterestDownloader ले प्रयोगकर्ताको डाउनलोड गरिएको भिडियो ट्र्याक गर्छ?
होइन, PinterestDownloader ले डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू भण्डार गर्दैन। सबै भिडियोहरू Pinterest सर्भरहरूमा होस्ट गरिएका छन् र हामी दर्शकहरूको डाउनलोड इतिहास भण्डार गर्दैनौं। सबैले यो उपकरण गुमनाम रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। यो उपकरण दर्शकहरूको लागि 100% सुरक्षित छ।
एन्ड्रोइडमा Pinterest डाउनलोडर कसरी प्रयोग गर्ने?
एन्ड्रोइडमा Pinterest बाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न तीन चरणहरू छन्। पहिलो चरण तपाईको एन्ड्रोइड वेब ब्राउजरमा pinterestdownloader.com भ्रमण गर्नु हो। दोस्रो चरण भनेको डाउनलोडर इनपुटमा तपाइँको प्रतिलिपि गरिएको URL टाँस्नु हो र तेस्रो चरण डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नु हो। यी चरणहरू पालना गरेपछि तपाईंको Pinterest भिडियो डाउनलोडको लागि तयार छ।
Mac OS मा Pinterest भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
Pinterest डाउनलोडरले तपाईंलाई Pinterest भिडियोहरू तपाईंको कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा मोबाइल फोनमा दर्ता वा सफ्टवेयर बिना बचत गर्न दिन्छ। Pinterest भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गरेर, तपाईं सजिलैसँग Pinterest भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई उच्च गुणस्तरको mp4 भिडियो फाइलहरूको रूपमा नि: शुल्क बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले बचत गर्न वा डाउनलोड गर्न चाहनुभएको Pinterest भिडियोहरूको URL प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
डाउनलोडर इनपुट बक्समा भिडियोको Url टाँस्नुहोस्।
डाउनलोड प्रक्रिया सुरु गर्न "डाउनलोड" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
प्रक्रिया पूरा भएपछि, तपाईंको भिडियो डाउनलोडको लागि तयार हुनेछ। Pinterest भिडियो डाउनलोड गर्न डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
के Pinterest भिडियो डाउनलोडर नि: शुल्क छ?
हो! र यो सधैं हुनेछ। हामी हाम्रो उपकरणको साथ मानिसहरूलाई मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं।
के मैले डाउनलोड गर्न सक्ने भिडियोहरूको संख्याको सीमा छ?
होइन, भिडियो डाउनलोड गर्न कुनै सीमा छैन। तपाईं कुनै पनि सीमा बिना असीमित भिडियो डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ।
एन्ड्रोइड एप डाउनलोड गर्नुहोस्
हामी अब Pinterest भिडियोहरू डाउनलोड गर्नको लागि एउटा एप प्रदान गर्छौं। यो छिटो र सजिलो छ।
PinterestDownloader ले यसको सर्भरमा कुनै पाइरेटेड वा प्रतिलिपि अधिकार सामग्री होस्ट गर्दैन, र तपाईंले हाम्रो उपकरणबाट डाउनलोड गर्नुभएका सबै भिडियोहरू वा छविहरू तिनीहरूको सम्बन्धित CDN सर्भरबाट डाउनलोड हुन्छन्। र यो उपकरण कुनै पनि तरिकामा Pinterest सँग सम्बन्धित छैन।